Amanqaku kaLaura Himmer Martech Zone |
Amanqaku ngu ULaura Himmer
ULaura Himmer ngumhleli omkhulu. Indawo yakhe ye-niche sisikhokelo sentengiso, ukubhloga kwefashoni, indlela yokuphila kunye nokubhala okukhuthazayo. Ungumntu othanda ukomelela kwaye uyayithanda iyoga. ULaura ngumfazi ongesabi kwaye othanda ulonwabo.
Iindlela ezine ze-E-Commerce ekufuneka uzamkele
NgoMvulo, Februwari 4, 2019 NgoLwesithathu, Oktobha 28, 2020 ULaura Himmer
Umzi mveliso we-e-commerce kulindeleke ukuba ukhule ngokuqhubekayo kule minyaka izayo. Ngenxa yenkqubela phambili yetekhnoloji kunye nokwahluka kukhetho lokuthenga kubathengi, kuya kuba nzima ukubamba iinqaba. Abathengisi abaxhotyiswe kakuhle ziindlela zamvanje kunye netekhnoloji baya kuba nempumelelo ngakumbi xa kuthelekiswa nabanye abathengisi. Ngokwengxelo evela kwi-Statista, ingeniso ye-e-commerce yehlabathi iyakufikelela kwi- $ 4.88 yezigidi zeerandi ngo-2021.